खाना खानसाथ गरिने यस्ता कार्य कति घातक ?
स्वस्थ्य जीवनका लागि के गर्ने ? अक्सर हामी यसैको खोजीमा हुन्छ । स्वस्थ्य र तन्दुरुस्तीको लागि सन्तुलित खानेकुरा सेवन गर्छौ, व्यायाम गर्छौ, योगा गर्छौ, स्वस्थ्य परीक्षण गर्छौ । तर, यसले मात्र पुग्दैन । कतिपय सामान्य आनीबानीले पनि हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर गरिरहेको हुन्छ । जस्तो कि, खाना खाने शैली, नुहाउने तरिका, हिँड्ने, सुत्ने, बस्ने । सामान्यतः के भनिन्छ भने स्वस्थ्य जीवनको लागि स्वस्थ्य दिनचर्या पालना गर्नुपर्छ । यसमा कस्तो खाने भन्ने मात्र होइन, कसरी खाने भन्ने कुराले समेत अर्थ राख्छ । कहाँ हिँड्ने भन्ने कुरा मात्र ...
पहिलो गर्भ ! समस्या कम, चिन्ता बढी
गर्भावस्था आफैंमा एउटा जटिल अनि विशेष अवस्था हो । यस अवस्थामा आमा बन्ने खुशी मात्र जोडिएको हुँदैन, गर्भसँग समाजिक, पारिवारीक र आत्मीय सम्बन्ध रहेको हुन्छ । अझ पहिलो गर्भ ! दाम्पत्य जीवनको पहिलो सफलता अनि पहिलो अनुभव, शारिरीक मात्र होइन मानसिक अनि भावनात्मक परिवर्तन अनि जिम्मेवारी सबै कुरा एकै साथ आएकाले पनि होला गर्भवती महिलाहरुमा धेरै जिज्ञाशा हुने गरेको पाइन्छ । महिनावारी रोकिने बित्तिकै नवबिबाहित महिलाहरुमा एउटा नया तरंग थपिन्छ । कहिलेकाहिँ त महिनावारी ढिला भएमा महिलाहरु दुखित पनि हुन्छन् । गर्भ रहनेबित्तिकै सबैलाई समस्या हुन्छ ...
नेपालमा परिवार नियोजनका साधन प्रयोगकर्ता न्यून
पछिल्ला बर्ष परिवार नियोजन र यसका साधनबारे प्रचारप्रसार धेरै भएपनि १३ जिल्लामा अझै पनि यी साधनको प्रयोग न्यून रहेको पाइएको छ । ती जिल्लामा परिवार नियोजन साधन प्रयोगकर्ता ३० प्रतिशतभन्दा कम रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिवार स्वास्थ्य महाशाखाको तथ्याकं छ । विशेष गरी गरिब समुदाय, हिमाली पहाडका दुर्गम क्षेत्र, दलित र मुस्लिम समुदायमा यसको प्रयोग न्यून देखिएको महाशाखाका निर्देशक डा. नरेश केसीले बताए । उनले भने, ती क्षेत्रमा परिवार नियोजनका साधनको उपयोगिताबारे चेतना पुगेको छैन । यसलाई शिक्षाबाट मात्रै परिवर्तन गर्न सकिन्छ । परिवार नियोजनका साधन प्रयोगले शरीरलाई कमजोर पार्ने, ...
‘बिरामीको अकाल मृत्यु भए चिकित्सकबाटै क्षतिपूर्ति’
बिरामीको अकालमा मृत्यु या गम्भीर घाइते भएमा पीडितको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित चिकित्सकबाटै भराउने निर्णय सरकारले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले लापरबाही गर्ने चिकित्सकबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गर्न कानुन बनाउने निर्णय गरेको छ । ‘पछिल्लोपटक अस्पतालमा चिकित्सकको लापरबाहीका कारण बिरामीको अकालमा मृत्यु हुने र गम्भीर घाइते हुने समस्या देखिएकाले ती पीडितको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित चिकित्सकबाटै भराउने उद्देश्यले आवश्यक विधेयक निर्माण गरी सदनमा पेस गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ,’ सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि संवाददाताहरूसित भने । चिकित्सकहरूको छाता संगठन ...
अप्रेसन गर्ने डाक्टरको घाँटीमा घण्टी ?
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकका लागि एउटा कडा निर्णय गरेको छ । कसैको उपचारमा लापरवाही भएमा सो वापत सम्बन्धित चिकित्सकले नै पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने गरी सरकारले कानून निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । डा. राकेश मिश्र कुनै पनि चिकित्सकले कुनै बिरामीको शल्यक्रिया गर्दा केही भएमा कुनै प्रकारको दाबी गर्ने छैन भनेर बिरामीमा आफन्तसँग कागज गराउने अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन छ । तर, अब सरकारले विरामीको उपचारमा लापरवाही गरेरमा सम्बन्धित डाक्टरबाट खर्च भराउने नयाँ व्यवस्था हुन लागेको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबारको निर्णयबारे सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ...
तेल, रक्सी र मुटुः फ्याटको फ्याक्ट
कुन खाने तेलले मुटुलाई फाईदा गर्छ ?’ मलाई धेरै मुटु रोगीहरुले सोध्ने एउटा साझा प्रश्न हो यो । धेरै मानिसहरु खाने तेल, कोलेस्टेरोल र अन्य चिल्लो खाद्य पदार्थबारे भ्रममा परेका देखिन्छन् । केही वर्षअघिसम्म बजारमा मुख्य रुपमा तोरीको तेल मात्र पाइन्थ्यो । धेरैले तोरीकै तेलमा तरकारी पकाएर खाने गर्थे । शुद्ध चाहिंदा र रोटी, पुरी पकाउँदा गाई भैसीको घिउ प्रयोग हुन्थ्यो । आज बजारमा तोरी लगायत भट्मास, सुर्यमूखी, मकै, बदाम, ओलिभ आदि, धेरै थरीका खाने तेल विक्रिमा छन् । उद्योग व्यापारको प्रोत्साहन गर्ने जमाना छ । तेल उद्योगहरुले ...
कति हानिकारक घुर्ने समस्या ? यस्तो छ समाधान
पत्यार नलाग्न सक्छ, तर घुर्ने समस्याले दम्पतीबीच फाटो समेत ल्याउने गरेका छन् । केही घटना यस्ता छन्, घुरेकै कारण दम्पतीको सम्बन्ध बिच्छेद भएको । घुर्ने समस्या सामान्य लाग्छ । सुतेपछि आफु घुरेको पत्तो हुँदैन । यद्यपी यसले अरुलाई भने बाधा गर्छ । त्यतीमात्र होइन, आफ्नै स्वास्थ्यमा समेत यसले हानी पुर्‍याउँछ । खासमा यो सास लीको आंशिक अवरुद्धताका कारणले श्वासप्रश्वास क्रियाको क्रममा र्कश कम्पन हुनुलाई घुर्ने समस्या भनिन्छ । घुर्ने समस्यालाई गहिरो निन्द्राको द्योतक मानिएतापनि यथार्थ यसको ठीक विपरित छ । वास्तवमा निन्द्रामा घुर्ने मान्छे ...
एक समय धेरैले गुनगुनाउने गीत थियो, ‘आत्मामा मेरो आत्मामा’ । स्रोताको मन त जित्यो नै, साथै नेपाली गीत–संगीतको बजार विस्तारमा पनि यो गीतले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह ग¥यो । गीतसँगै चर्चामा आए गायक कमल खत्री । त्यसयता उनले दर्जनौँ गीत बजारमा ल्याएका छन् । भर्खरै अमेरिकाबाट फर्किएका खत्री धेरै देश पुगेका छन्, स्वदेशमा पनि उनको सेड्युल व्यस्त छ । गायक खत्रीलाई नपुग केही छैन, तर पनि सामान्य जीवनयापन गर्न मन पराउँछन् । खाना घरमै खान्छन्, सामान्य पहिरनमै बाहिर निस्कन्छन् । नयाँ पत्रिकाका रामजी ज्ञवालीसँग खत्रीले आफ्नो ...
धूम्रपान स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ, जुन कुरा सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । सबैलाई थाहा भए पनि दुःखको कुरा चुरोट तान्नेहरूको संख्या भने झन् बढ्दो छ । चुरोटले हाम्रो शरीरका सबैजसो अंगमा असर गर्छ । चुरोट सेवन गर्ने ३० देखि ५० वर्षसम्मका व्यक्तिलाई हृदयाघातको सम्भावना चुरोट सेवन नगर्नेभन्दा पाँच गुणा बढी हुन्छ । मुटु र रक्तनलीसम्बन्धी रोगमध्ये २५ प्रतिशत धूम्रपानका कारण हुने विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको छ । यसले रगतलाई बाक्लो बनाई जम्ने सम्भावना बढाउँछ । धूम्रपानले रक्तनलीको भित्री भागमा कोलेस्ट्रोल जम्मा गराउँछ । सुर्तीजन्य पदार्थमा अत्यधिक निकोटिन हुने ...
निजी फार्मेसी हटाउन टिचिङको अटेरी
महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) ले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत अस्पतालको हाताभित्र निजी फार्मेसी हटाउन अटेरी गरेको छ । सर्वोच्चले अस्पताल परिसरभित्रका निजी फार्मेसी हटाउन आदेश दिएको २ वर्ष बित्दा पनि टिचिङले अझै हटाएको छैन । सरकारले सबै सरकारी अस्पतालमा आफ्नै फार्मेसी खोल्ने निर्णय गरी अघिल्लो वर्ष नै आवश्यक रकमसमेत निकासा गरिसकेको थियो । सर्वोच्चको आदेशअनुसार सरकारी अस्पतालभित्र निजी फार्मेसी सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । निजी फार्मेसी सञ्चालन नियन्त्रण गर्न सरकारले ‘अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका ०७२ जारी गरेको छ । टिचिङले भने उक्त निर्देशिकाविपरीत अस्पताल परिसरभित्र निजी ...
गर्मी महिनामा गुलियो तथा फोहोर भएको ठाउँमा झिँगा धेरै आउने गर्छ । त्यसबाट छुटकारा पाउन हामी अनेक उपाय खोजिरहेका हुन्छौँ । झिँगाबाट फैलन सक्ने रोगबाट बच्न खाने परिकारलाई फ्रिजमा राख्ने गर्नुपर्छ । तर, सबैलाई यो सम्भव नहुन पनि सक्छ । त्यसैले, घरमा झिँगाबाट बच्न केही यस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ : स्याउको बोक्रा झिँगा भगाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ । स्याउको बास्ना झिँगालाई मन पर्ने भएकाले यो उपयोगी हुन्छ । त्यसका लागि स्याउको बोक्रा एक कप तातो पानीमा उमाल्ने र बोतलमा हालेर खुला राख्नुपर्छ । त्यसरी राख्दा आउने ...
जिल्लाका ७२ स्वास्थ्य संस्था स्थानीय तहमा हस्तान्तरण
जिल्ला जनस्वस्थ्य कार्यालयको माताहतमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरु स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले आइतबार औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी आफ्नो माताहतमा रहेको स्वास्थ्य संस्थालाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको हो । कार्यालयले जिल्लमा रहेका ७२ वटा स्वास्थ्य संस्था र ७ आयुर्वेद औषधालय जिल्लाका आठ वटा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको हो । हस्तान्तरण गरिएको स्वास्थ्यसंस्थामध्ये सबैभन्दा धेरै बेसीशहर नगरपालिका र मध्यनेपाल नगरपालिकामा ११÷११ वटा र कम दूधपोखरी गाउँपालिकाको पाँच वटा स्वास्थ्य संस्था हस्तान्तरण गरिएको छ । त्यसैगरी, सुन्दरबजार नगरपालिका, मस्र्याङ्दी गाउँपालिका र दोर्दी गाउँपालिकामा १०÷१० वटा, राइनस ...
‘कुन खाने तेलले मुटुलाई फाईदा गर्छ ?’ मलाई धेरै मुटु रोगीहरुले सोध्ने एउटा साझा प्रश्न हो यो । धेरै मानिसहरु खाने तेल, कोलेस्टेरोल र अन्य चिल्लो खाद्य पदार्थबारे भ्रममा परेका देखिन्छन् । केही वर्षअघिसम्म बजारमा मुख्य रुपमा तोरीको तेल मात्र पाइन्थ्यो । धेरैले तोरीकै तेलमा तरकारी पकाएर खाने गर्थे । शुद्ध चाहिंदा र रोटी, पुरी पकाउँदा गाई भैसीको घिउ प्रयोग हुन्थ्यो । आज बजारमा तोरी लगायत भट्मास, सुर्यमूखी, मकै, बदाम, ओलिभ आदि, धेरै थरीका खाने तेल विक्रिमा छन् । उद्योग व्यापारको प्रोत्साहन गर्ने जमाना छ । तेल उद्योगहरुले ...
सेतो कपाल अर्थात कपाल फुल्नु , धेरैको निम्ति टाउको दुखाईको बिषय हो । एउटा निश्चित उमेरपछि कपाल फूल्नु स्वभाविक हो । यद्यपी अहिले कम उमेर वा किशोरवयमै कपाल सेतो हुने समस्या देखिन्छ । कपाल सेतो भएपछि त्यसलाई कालो बनाउन अनेक विधी अपनाइन्छ । धेरैले मेहेन्दी लगाउँछन् । यसले किशोरहरुको व्यक्तित्व विकासमा असर पर्छ नै, आत्माविश्वास पनि कमजोर हुन्छ । किन सेतो हुन्छ कपाल ? हाम्रो शरीरमा मेलानोसाइटिस सेल्स पाइन्छ, जसले कालो वर्ण निर्माण गर्छ र हाम्रो कपाललाई कालो बनाउँछ । अक्सर यो मेलनिनको उत्पादन उमेर बढेसँगै घट्दै ...
सन्की मनोजको सात्विक रुपान्तरण
भक्तपुर बालकोटस्थित निवासमा हामीले भेट्दा चर्चित हास्य कलाकार मनोज गजुरेल ध्यान मुद्रामा थिए । शान्त र सौम्य उनको मुहारमा दिव्य आनन्द भाव प्रकट भइरहेको थियो । केहीबेरपछि उनको ध्यान मुद्रा भंग भयो । बसी-बसी विस्तारै दुवै हत्केलालाई नमस्ते आकारमा ल्याए र आपसमा रगडे । त्यसरी रगड्दा उत्पन्न ऊर्जा तापले दुवै आँखा सेके । अनि विस्तारै आँखा उघारे । ध्यानपछिको दुर्लभ आनन्द भाव चारैतिर छर्दै मुस्कुराए । उनको तामसिक जीवन-चरित्र कहीँ कतै झल्किएन । उनको वरिपरि कुनै ग्ल्यामर पत्रिका थिएन, कामुक सुन्दरीको तस्बिर पनि थिएन । दराजमा मदिरा ...
धुलोले असर गरे निःशुल्क उपचार गराउन सर्वाेच्चकाे अादेश
धुलो, धुवाँ, वायु प्रदुषण र फोहोरका कारण मानव स्वास्थ्य जोखिममा परेको निश्कर्षसहित सर्वोच्च अदालतले रोकथामका लागि तत्काल सार्वजनिक निर्माण विभाग गठन गरी कदम चाल्न सरकारलाई परमादेश दिएको छ । सरकारी निकायले प्रदुषण नियन्त्रणका लागि तत्काल र दीर्घकालिन रुपमा गर्नुपर्ने कामको सूची नै तोकेर परमादेश जारी भएको हो । वातावरण स्वच्छ राख्ने जिम्मेवारी सरकारको रहे पनि सम्बद्ध निकायले नियन्त्रण गर्न नसकेका कारण कसैलाई गम्भीर क्षति पुगे सरकारले नै निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने चेतावनीसमेत सर्वोच्चले दिएको छ । खासगरी विनाशकारी भूकम्पपछि राजधानी लगायत मुलुकका सहरमा धुलो र धुवाँको प्रकोप बढेको, मुलुकको ...